Hindiya oo war cusub kasoo saartay Soomaali u xiran | Kobciye24.com
Hindiya oo war cusub kasoo saartay Soomaali u xiran
Nov 12, 2016 - jawaab
Maxkamadda Gaarka ah ee Magaaladda Mumbai ayaa Qeeyb ahaan ogolaatay Qiraalkii ay Buuxiyeen 117 Muwaaaadiniin Soomaali ah oo lagu edeeyay Burcadbadeednimmo.
Maxkamaddu waxaa ay Go,aan Ka Gaari doontaa eedda loo Heeysto muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo Adeegsaneeysa Qiraalka Codsiyadda ay soo Qoreen marka ay Gaareeyso G,aanka Kama Dambeeysta ah.
Codsiyadda oo ay ku lifaaqanyihiin Qiraalka eedeeysanayaasha ayaa la diiwaangaliyay Aqbalidoodda Rasmiga ahna Dib ayaa loo dhigay Tan iyo inta Laga Gaarayo Qeeybta 313 aad ee Tiradda Wadiiqadda Dambiyadda.
Sida ay warisay Indian Express 2011 12o Muwaadiniin soomali ah ayaa waxaa Soo Qabtay Ciidamadda Badda Hindia waxaana Lagu Soo Xiray Xabsiga ciidamadda Badda Magaaladda Mombai, Labo kamid ah eedeeysanaaysha Soomalidda ah ayaa Xabsiga ku dhintay.
Codsiyadda hadda la Aqbalaya yaa waxaa ay maxkamadda Soogaareen Bishii lasoo dhaafay waxaana Sooqorau 117 Muwaadiniin Soomaali ah, Waxaayna usoo Marsiiyeen Safaaradda Jamhuuridda Faderalka Soomalia ay ku leedahay Hindia, Laba ka mid ah eedeesanayasha ayaa lasheegay in ay Diideen Qiraalka.
Eedeeysanayaasha Soomaliyeed eek u xiran Hindia ayaa Sugaya go,aan kama Dambeeys ah oo ay ka Gaarto Maxkamadda Mambia